Indibaniso entle yamava kweyona yunivesithi indala kunazo zonke kwihlabathi | US Taalsentrum
Op 17/09/2019 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Navorsing, Ons tale geplaas
USanet de Jager, oyitoliki yeZiko lezeeLwimi, uye wathabatha inxaxheba kwiprowujekthi yeYunivesithi engokhenketho, ekunjongo yayo ikukuba abafundi nabasebenzi base-SU bathabathe inxaxheba kwiinkqubo ezingotshintshelwano kwinqanaba lehlabathi liphela. USanet uchithe iinyanga ezintathu kwiYunivesithi yaseBologna e-Italy, kwaye siye ke sadlana iindlebe kunye naye saze samcela ukuba asixelele kabanzi ngohambo lwakhe.
Kwenzeke njani konke oku?
“Ndiqale ukuva ngolu tshintshelwano ngomlawuli wethu, uGqr Kim Wallmach, ngelixa lentlanganiso engophando-nzulu olujoliswe kwimicimbi yezeeNkonzo zoToliko. Ndiye ndafaka isicelo sotshintshelwano lwe-Erasmus+ kwi-Ofisi yeHlabathi Jikelele kwaze kwathi emva kwesithuba senyanga, ngekaCanzibe (Meyi) 2019, ndazifumana ndingqongwe yimbali, ubutyebi bezophando-nzulu kunye neekofu zohlobo lwe-espresso ezixabisa iyuro enye nge-espresso nganye. Indima yam kolu tshintshelwano ibikabini: Ndiye nje ngetoliki yeZiko lezeeLwimi (LC) ukuze ndakhe ubuhlobo obuluqilima nokuze nditshintshelane ngolwazi olumalunga nomsebenzi, ndabe ndikwaye nje ngomfundi ukuze ndenze uphando-nzulu lwam lwee-Mastasi kumsebenzi woGuqulo lweeLwimi, nolugxile ngokukodwa kumahluko phakathi kwethoni yentetho etolikwayo nentetho eqhelekileyo.”
“ISebe lezoToliko noGuqulo lweeLwimi (DIT) lakwiYunivesithi yaseBologna lifumaneka kwidolophu iRomanesque yaseForlì malunga nohambo ngololiwe lweyure ukusuka eBologna. Yeyona ndawo ke bendiyibiza ngekhaya leyo. Ekuncokoleni kwam nomququzeleli wam uProfesa Mariachiara Russo, kuye kwandicacela ukuba ‘iipolitiki zezeelwimi’ akuyonto iphila eMzantsi Afrika kuphela. Le yunivesithi ifumana abafundi abaliqela abangotshintshelwano kwaye ngenxa yoko ezinye izifundo kule yunivesithi zihlohlwa ngolwimi lwesiNgesi – nto leyo inokuthi ixhomise amehlo kwilizwe elikhuthaza imfundo engeelwimi zenkobe kubemi balo.”
Ubusenza ntoni pha?
“Mna noGqr Wallmach sibe nenyhweba yokwabelana kunye nabo malunga nendlela iYunivesihi yaseStellenbosch (SU) ekhawulelana ngayo nomba wosetyenziso lweelwimi ngeelwimi nokuba i-LC ibonelela kanjani na ngezisombululo ezineenkalo ngeenkalo kwimingeni yezeelwimi, nalapho esinye sezo zisombululo ikukutolika ngokufundisayo. Ndiye ndathetha ngemisebenzi yemihla ngemihla yetoliki efundisayo, ndabelana ngeendlela esivavanya ngazo umsebenzi, uqeqesho lwethu, iishedyuli kwakunye nophando-nzulu lwethu lwakaloku nje malunga nomsebenzi wetoliki. Abe-DIT babonakele benomdla ngokukodwa kwiiNkonzo zethu zoToliko, kangangokuba uProfesa Russo uye wandwendwela i-SU ekupheleni kweyeKhala (Julayi) ukuze azibonele ngokwakhe olu toliko lungokufundisayo nokuze aphande ubungakanani bokukwazeka kokusungulwa kweprowujekthi eyinzame engotoliko kwiYunivedsithi yaseBologna ngaphakathi kwi-DIT.”
US TaalsentrumArtikels in Xhosa Dialogos Navorsing Ons taleIndibaniso entle yamava kweyona yunivesithi indala kunazo zonke kwihlabathi